संचारकर्म संगीतहुँदै सामाजिक कार्यमा चम्किदै दिब्यज्योति « Khasokhas Follow @khasokhasmag
उनको रुची थियो सांगितिक क्षेत्रमा तर भइन् संचारकर्मी । उनको रगतमै थियो गीत संगित तर समयले बनायो पत्रकार । पेशाले पत्रकार भएपनि अहिले भने सांगितिक आकाशमा समेत चम्किदै छिन् दिब्यज्योति । ‘संचारकर्मी दिब्यज्योति’लाई अचेल धेरैले ‘गायक दिब्यज्योति’का रुपमा चिन्न थालेका छन् ।
डडेल्धुरा जिल्लाको बगरकोट ९ मा पिता रुपसिंह बिष्ट र माता कल्पना बिष्टकी छोरीका रुपमा जन्मेकी दिब्यज्योतिको बच्चैदेखि गीत संगितमा रुची थियो । १० कक्षासम्म बैजनाथ माध्यामिक विद्यालय कञ्चनपुरमा पढेकी उनले विद्यालयमा पढ्दा पनि विभिन्न सांगितिक प्रतियोगिताहरुमा भाग लिन्थिन् । सानोतिना पुरस्कारहरु पनि हात पार्थिन् ।
बुबाले पनि गीत गाउने भएकाले दिब्यज्योतिमा गीतसंगितप्रति अझ रुची बढेको थियो । उनी जन्मुअगाडि नै बुबाले रेडियो नेपालमा भ्वाइस टेस्ट दिएर पास गर्नुभएको थियो । त्यसैले आफ्नो रुची र क्षमता बंशानुगत भएको ठान्छिन् उनी । बाल्यकालका दिन सम्झिदै दिब्यज्योति भन्छिन् — म्युजिकमा बच्चैदेखि रुची र रहर थियो । त्यसैले विद्यालयका हुने प्राय प्रतियोगिताहरुमा भाग लिन्थें । पुरस्कार जित्दा अत्यन्तै खुशी लाग्थ्यो । गायिका नै हुन्छु जस्तो लागेको थियो तर भइयो पत्रकार ।
बुबा सरकारी जागिरे । जागिरमा व्यस्त हुनुपर्ने बाध्यताले उहाँ गीत संगीतमा लाग्न पाउनुभएन । तर रुची भने तीब्र थियो । त्यसैले त्यो बेलामा पनि डडेल्धुराबाट काठमाडौं आएर रेडियो नेपालमा भ्वाइस टेस्ट दिनुभएको थियो बुबाले । तर उहाँले गीत संगितमा मौका पाउनुभएन । त्यसैले उहाँको कला त्यत्तिकै मर्यो । तर दिब्यज्योतिले भने आफ्नो त्यो बंशानुगत कला मर्न दिइनन् । उनी भन्छिन् — ‘बाध्यताले बुबाको कला मर्यो । तर मैले मौका पाएकाले मभित्रको कला मार्न उचित ठानिन । बुबाले गाउनुपर्छ भनेर नसिएकाएपनि त्यो कला ममा बुबाबाटै सरेको हो ।’
नेपाल वान टेलिभिजनमा कार्यरत रहँदा दिब्यज्योति ।
मामाघर काठमाडौंमा भएकाले दिब्यज्योतिलाई काठमाडौंमा आएर पढाईलाई निरन्तरता दिन सजिलो भयो । काठमाडौं आइसकेपछि उनले पद्मकन्यामा पढ्न थालिन् । पढ्ने क्रममा पनि उनको रुची गीत संगितमा नै थियो । तर त्यही समयमा नेपाल वान टेलिभिजनले समाचारवाचिकाका लागि काठमाडौंमा स्क्रीन टेस्ट लिइरहेको थियो । दिब्यज्योति पनि टेस्ट दिन गइन् । उनको भिडियो खिचियो । त्यो भिडियो हेरेपछि नलिनी सिंहले दिब्यज्योतिलाई समाचारवाचिकाका रुपमा राख्ने निर्णय गरिन् । त्यसपछि गायिका बन्ने सपना बोकिरहेकी दिब्यज्योति पुगिन् समाचारबाचिका बनेर दिल्ली ।
दिल्ली पुगेर उनले नेपाल वान टेलिभिजनमा समाचारबाचिकाका रुपमा काम गर्न थालिन् । समाचार पढ्दा पनि उनलाई गाउन नपाएकोमा जीवनको महत्वपूर्ण रुची र पाटो छुटिरहेको अनुभव भइरहेको थियो । उनी भन्छिन् — ‘म्युजिकमा रुची भएपनि नेपाल वान टेलिभिजनमा समाचार वाचिकाको काम पाउँदा त्यसलाई मैले गुमाउन चाहिन । अचानक संचारकर्मीका रुपमा करिअर सुरु भयो ।’
भर्खरै बजारमा आएको एल्बम सान्निध्यको कभर ।
२००४ मा नेपाल वान टेलिभिजनमा समाचारवाचिका र कार्यक्रम संचालिकाका रुपमा प्रवेश गरेकी दिब्यज्योतिले सन् २००७ सम्म त्यहाँ काम गरिन् । त्यसपछि नेपाल फर्केनी उनले झण्डै एकबर्ष हिमालय टाइम्स दैनिकमा काम गरिन् । युकेको नेपाली टिभीमा डेढबर्ष समाचार वाचिकाका रुपमा काम गरेकी दिब्यज्योतिले सन् २००८ बाट एबीसी टेलिभिजनमा काम गर्न थालिन् । हाल पनि उनी एबीसीमा नै आबद्ध छिन् ।
नेपाल आइसकेपछि दिब्यज्योतिले गीतसंगितमा लाग्ने रहर तत्काल पूरा गर्न चाहेकी थिइन् । गीतसंगितका साथी संगितकार सुदाम थापासमक्ष उनले आफ्नो योजना सुनाइन् । तर सुदामले हचुवाका भरमा त्यतिकै गीत नगाउन सुझाव दिए । सुदामले आफ्नी पत्नी तथा गायिका सिन्धुमल्लका गुरु चन्दनकुमार श्रेष्ठसँग संगित सिक्न सुझाव दिए । त्यसपछि दिब्यज्योतिले संचारकर्मीको आफ्नो पेशालाई निरन्तरता दिंदै चन्दनकुमार श्रेष्ठसँग संगित सिक्न थालिन् । अहिले उनको संगीतमा आठौंबर्ष चलिरहेको छ ।
लोकजननीमार्फत सामाजिक कार्यमा दिब्यज्योति ।
दिब्यज्योति भन्छिन् — ‘मैले हचुवाका आधारमा गीत संगितप्रतिको आफ्नो रुची पूरा गर्ने योजना बनाएकी थिएँ । तर संगीत सिक्न थालेपछि संगीतको लागि साधना चाहिने रहेछ भन्ने कुराको अनुभव भयो । मैले त्यतीबेला हतारमा गीत ननिकालेर ठीक गरेछु भन्ने अनुभव संगित सिकेपछि भयो ।’
संगित सिक्न थालेको झण्डै चारबर्षपछि दिब्यज्योतिले सन् २०११ म पागल बनायौं प्रिय बोलको गीत गाइन्, शिव परियारको संगितमा । केशव आचार्यको शब्द रहेको उनको त्यो गीतले उनलाई गायिकाको परिचय दियो । पछि उनले त्यो गीतको म्युजिक भिडियो समेत निकालिन् । त्यसपछि उनलाई दुईवटा फिल्म ‘देशभक्त सिपाही’ र विधवामा गीत गाउने अफर आयो । चलचित्र विधवामा उनले टाइटल गीत नै गाइन् ।
अहिलेसम्म दिब्यज्योतिले २ दर्जन भन्दा धेरै गीत गाइसकेकी छिन् भने आधा दर्जन गीतका भिडियो पनि आइसकेका छन् । नेपालको सांगितिक क्षेत्रमा फरक पहिचान बन्दै गएको छ दिब्यज्योतिको । यही क्रममा हालै उनको एकल गीति एल्बम सान्निध्य बजारमा आएको छ । आधुनिक गीतहरुको उनको यो एकल एल्बममा संगीत उनकै गुरु चन्दनकुमार श्रेष्ठको रहेको छ ।
एबीसी टेलिभिजनमा कार्यरत रहँदा दिब्यज्योति ।
गुरुकै संगीतमा गीति एल्बम निकाल्न पाएकोमा निकै खुशी छिन् दिब्यज्योति । आफ्ना गीतहरुले एल्बमको रुप पाउनुमा गुरुकै देन रहेको उनको भनाई छ । जिनियस डिजिटल म्युजिकले बजारमा ल्याएको यो एल्बममा पाँचवटा गीतहरु रहेका छन् । जसमध्ये तीनवटा गीत दुर्गालाल श्रेष्ठले, एउटा कुमार विवाहितले र एउटा गीता त्रिपाठीले लेखेकी हुन् । दिब्यज्योति भन्छिन् — ‘एउटामात्रै गीत गर्ने कुरा थियो । तर गाउँदा गाउँदै पाँचवटा भए । अनि एल्बम निकालियो ।’
एल्बम निकालेपछि अहिले दिब्यज्योतिलाई विभिन्न संचारमाध्यममा अन्तरवार्ताका लागि भ्याईनभ्याई छ । विभिन्न राष्ट्रिय संचारमाध्यममा छाएकी छिन् उनी र उनको सान्निध्य । सान्निध्यको चर्चाबाट हौसिएकी उनले केहीसमयभित्रै गीतको भिडियो पनि निकाल्ने तयारी गरिरहेकी छिन् । नेपालमा बिभिन्न कार्यक्रमहरुमा समेत पुगेर गाउन थालेकी छिन् उनले । तर पनि पेशागत रुपमा भने अगाडि बढ्ने उनको सोंच छैन । उनी भन्छिन् — ‘बुबाले संगीतलाई साधनाका रुपमा लिन र संगीतलाई पूजा गर्न सुझाव दिनुहुन्छ । मलाई पनि त्यही नै लाग्छ । म संगितलाई साधनाका रुपमा लिन्छु र पूजा गर्छु । तर करिअर भने संचारक्षेत्रमा नै कायम राख्नेछु । गीत संगितलाई पहिले रहरका रुपमा लिएकी थिएँ, अहिले यसबाट आत्मसन्तुष्टी मिलेको छ ।’
फोटोशेसनका क्रममा दिब्यज्योति ।
पद्मकन्याबाट म्युजिक स्नातक गरेकी दिब्यज्योति सामाजशास्त्र र राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर अध्ययनरत छिन् । त्रिभुवन विश्विद्यालयले पद्मकन्यामा पुरानो कलाकारको नाममा राखेको अवार्डहरुमध्ये म्युजिकमा राम्रो दख्खल गरेको र राम्रो नम्बर ल्याएका विद्यार्थीलाई दिने सबै अवार्डहरु यसपटक दिब्यज्योतिले नै हात पारिन् देबचन्द्र रेग्मी, खेमचन्द्र र सतिसचन्द्र, गोपालयोञ्जन लगायतका पुरस्कारहरु दिब्यज्योतिले हात पारेको उनकी म्युजिक पढाउने शिक्षिका सरोजनी तण्डुकारले जानकारी दिइन् । पत्रकारितामा समेत विभिन्न अवार्डहरु हात पारेकी दिब्यज्योतिले अहिले गीत संगितमा अवार्ड पाउन थालेकी छिन् ।
पत्रकारिता र कलाकारितासँगै हाल उनी सामाजिक क्षेत्रमा समेत व्यस्त छिन् । लोकजननी नामको सामाजिक संस्थामार्फत उनी सामाजिक क्षेत्रमा कृयाशिल भएकी हुन् । नेपालमा गएको विनाशकारी भूकम्पपछि पुनम मिश्रसँग मिलेर दिब्यज्योतिले भूकम्पपीडितका लागि पाल सिलाउन थालिन् । पछि यो अभियानमा अरुले पनि साथ दिए । उनीहरुले झण्डै २ हजार पाल सिलाएर भूकम्पपीडितलाई हस्तान्तरण गरे । त्यसपछि सामाजिक क्षेत्रमा लाग्न उनलाई अझ रुची बढ्यो, अनि जन्म्यो लोकजननी ।
आफैले गाएको गीत पागल बनायौ प्रियको म्युजिक भिडियोमा अभिनयका क्रममा दिब्यज्योति ।
दिब्यज्योति र उनका साथीहरु मिलेर लोकजननी स्थापना गरेपछि त्यसयताको छोटो अवधिमा नै उनीहरुले धेरै काम गरिसकेका छन् । भूकम्पलगत्तै लोकजननी मार्फत राहत वितरणका काम गरेका उनीहरुले रामेछापको डाँडागाउँमा भूकम्पपीडितका लागि ४० वटा घर बनाए । नेपाल आयरल्याण्ड सोसाइटी र मारवाडी सेवा समितिको सहयोगमा उनीहरुले ती घरहरु बनाएका हुन् ।
पागल बनायौ प्रिय गीतको म्युजिक भिडियो ।
त्यो बाहेक विभिन्न स्कुलमा ड्रेस वितरण, छात्रबृत्ति, छात्राहरुलाई पढाउने काम समेत लोकजननीमार्फत गरिरहेका छन् । ६ जना नुवाकोटका गरिब, टुहुरा छोरीहरुलाई १० कक्षासम्म पढाउने योजनाका साथ लोकजननीले काम गरिरहेको छ । लोकजननीमार्फत नै उनीहरुले दाम्लोमा बाँधेर राखिएकी मानसिक बिरामी सृजना कार्की खड्कालाई उदयपुरबाट उद्दार गरेर काठमाडौं ल्याए । कार्कीको अहिले काठमाडौंमा उपचार भइरहेको छ । सातजना मिलर सुरु गरिएको लोकजननीकी कोषाध्यक्ष हुन् दिब्यज्योति ।
समाजसेवा, संचारकर्मी र संगीतमा एकसाथ चम्किरहेकी दिब्यज्योतिले भविश्यमा भने संचारकर्मलाई नै पहिलो प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्ने योजना बनाइरहेकी छिन् । भन्छिन् — ‘गीत संगित त मेरो नशानशा र रगतमा छ । तर करिअर भने संचारकर्ममै अगाडि बढ्छ । सामाजिक कार्यमा सकृय हुन पनि छाड्नेछैन ।’
खसोखास साप्ताहिकको वर्ष ५ अंक ४२ पूर्णाब्क १४१, शुक्रवार, कात्तिक १२–१८, २०७३ (Year5Vol. 42 Full Vol. 141, (Octoer 28-November 3, 2016 ) मा प्रकाशित ।